Yakareba Dhombodo Yakazara Yakazara Nemakata Makuru - Buddhatrends
pashure | Next
Yakareba Dhombodo Yakazara Yakazara neMakata Makuru
$128.00 $160.00 Unoponesa 20% ($32.00)
Kudzoka & Kutengesa
Kana iwe uri kutsvaga chimwe chinhu chaunogona kuwirirana nemakore akawanda e-sleeve turtlenecks kana kunyange t-shirts, iyi yakareba kwenguva refu yemidhi yaizowedzera kuchinja kwezvinhu zvako zvekushongedza zvinokosha. Yakagadzirwa kubva padhinho nekotoni, iyo inotonhorera uye yakasununguka yemupfekero uyu wakasiyana-siyana inotarisa zvakananga kunze kwemugwagwa.
If you are not sure what shoes to pair it with, start with sneakers or platforms for a more laid-back feel. Side pockets make carrying your phone or purse much more easier.
Masikisi anotanga kubva kuS kusvika kuL.
Kureba Kwemhete: Ankle-Length
Mashoko: Denim neKotoni
Rudzi rwemuenzaniso: Geometric
Size Waist(Cm) Lenght
S 74 135
Kudzokera, Kudzoka & Kudzorera:
Kuti tidzorere chinhu chinyorwa shanyira rekudzoka / peji rekushandurahttps://www.buddhatrends.com/pages/returns-exchange
Icho chikamu chinogadziriswa chekutora kutumira mifananidzo yezvinhu zvakakanganiswa / zvakaputsika. Zvichava zvinobatsira zvikuru kana iwe utumira mifananidzo yakajeka yechirema.
Kana chinhu chacho chisina kukanganisa uye iwe unongoda kuzvishandura nekuda kwehukuru / ruvara kana kuti kusavhiringidza chinhu chacho, chinogona kudzorerwa kamwechete. Mutengi anozvidavirira kubhadhara kubhadhara kudzorera, kutarisira pamwe chete nemhosva yekudzorera.
FUNGA HERE: Tataura nezvezvinhu zvose zvakasanganiswa mumusanganisi wemuiti wega wega nematanho chaiwo mumamita masentimita, tapota chengeta izvi musati maisa urongwa uye kuti murege kunetseka kupi zvayo.
Nzira yedu yekudzivirira hutano yakavimbika, asi zviitiko zvisingafanoonekwi zvingaitika. Mune mamiriro ekusavaraidza kwemavara kana mashizha, pakarepo taurirana nevatsigiri vese, uyewo tipei mifananidzo yechinhu chacho kugadzirisa dambudziko nekukurumidza.
Ramba uchifunga kuti kutumira & kero yekudzorera kwedu kunowirirana zvichienderana nenyika yako uye chikwata. Nokudaro, tinokurudzira zvakasimba kuti iwe uite zvinotevera muhutori hwedu hwekudzorera sezvinongoita zvose, kero yekudzorera nemirayiridzo ichawanika mukati mekudzoka kwehutano.
Munyaya yekushandiswa, kushambidzwa, kukuvadzwa kana chero imwe shanduko kubva mumamiriro ekutanga echinhu chacho, hatigone kuvimbisa mhinduro dzinokurumidza. Inyanzvi yekudzoka inonyatsotaura zvinhu izvi sechikamu chemutemo wekudzorera chinhu. Chero chero chinhu chisina chimiro chepakutanga pamwe nekupakata hazvizogamuchirwi.
Shandisai zvigadziriswa zvakasarudzwa zvinoshandiswa zvekutumira zviripo munyika yako. Panyaya yechinhu chiri kuvharirwa pamitambo, hatisi kukodzera kubhadhara mutero / kutumira mabasa kwechimwe chinhu.
Nokuda kwehutano hwekudzoka, iwe unofanirwa kutaura pamusoro pepakiti se "Returned Product 0 $ Value."
Nekuregererwa kupi kwechimwe chinhu, unofanira kutitaurira mukati memaawa 12 ekuiswa kwechirongwa. Zvimwe zvinhu zvakatumirwa hazvigoni kuregwa.
Rudzikinuro runogona kubudiswa chete kana chinhu chacho chinodzorerwa nepakutanga kuvhara uye kusakanganiswa kwemamiriro ezvinhu. Ikutevera hakufaniri kupiwa kuti ive yakakodzera kubhadhara.
Kubhadhara kunodzokorodzwa zvichienderana neyokutanga yekubhadhara nzira yavanosarudza pakusarudza paunenge uchiita urongwa. Paypal kudzorerwa kunoitwa mukati mezuva rimwechete rekugamuchira chinhu chakadzoka pamakero edu ekudzorera atinogona kusiyana zvichienderana nenzvimbo yevatengi kuti tisaita kutakura kwekutengesa mari. Chikwereti Chakwereta chinotora kumativi e-10-15 mazuva akawanda sezvo iyi inowanzobhengi nguva yekubhadhara.
Imari yekudzorera ichaderedzwa yega yega yekudzoka / kushandiswa / kushandiswa asi kwete kupfuura 25% yemutengo wose wehurumende.
Nhengo yedu yekutsigira iri nguva dzose yakagadzirira kubatsira vatengi. Iwe unongoda kushandisa peji "Contact Us" chero ipi zvayo mibvunzo, uye isu tinogona kufara kukubatsira kugadzirisa matambudziko ako.
Collections: $ 100 kuti $ 150, zvose, Madhimoni ose, All Dresses, All Products, Bhuruu, Zvipfeko zvebhuruu, donje, Denim Dresses, Denim Overall Dresses, Dresses ne Pockets, Geometric, Hippie Dresses, L, guru, M, Maxi Dresses, nzira, Overalls, Overalls For Women, S, Sleeveless Dress, diki, simba, Spring 2018, Vintage Skirts
i like thanks so much
thank you super, wonderful
Oversized Denim Jacket $107.10 $126.00
Patchwork Plus Size Loose Denim Overalls $78.40 $98.00
Bhuruu / Rimwe Chikuru Green / One Size
Kusununguka Denim Kwazvo
Kusununguka Denim Kwazvo $78.40 $98.00
Baggy Boyfriend Harem Trousers $54.75 $73.00
Chimwe Chimiro / Chirume Chidiki
Dhimoni Kupfekedzwa Mbatya / Pamusoro
Dhimoni Kupfekedzwa Mbatya / Pamusoro Zvapera $110.00
Kusvibiswa Kwemavara Akasvibirira Dhein Zvikamu Zvizere Shorts
Kusvibiswa Kwemavara Akasvibirira Dhein Zvikamu Zvizere Shorts $57.60 $72.00
Bhuruu / L Bhuruu / M Bhuruu / S Bhuruu / XL
Chinoiserie Embroidery Tassel Denim Skirt
Chinoiserie Embroidery Tassel Denim Skirt Zvapera $121.00
Patchwork Vintage Denim Skirt
Patchwork Vintage Denim Skirt Zvapera $75.67
Oversized Denim Floral Print Yose
Oversized Denim Floral Print Yose $88.80 $111.00